Irénise Moulonguet: Frantsay Be Taona Indrindra
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Anglisy Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Grika Géorgien Holandey Hongroà Ibo Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kinyarwanda Koreanina Kroaty Litoanianina Malagasy Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Norvezianina Poloney Portogey (Brezila) Romanianina Rosianina Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tiorka Tseky Xhosa Zoloa
Feno 112 taona tamin’ny Novambra 2012 i Irénise Moulonguet, izay heverina fa olom-pirenena frantsay be taona indrindra. Vavolombelon’i Jehovah izy.
I Maria Richard foana hatramin’izay no noheverina hoe Frantsay be taona indrindra. Zato taona mahery izy ary nipetraka tany Frantsa. Zandrin’i Irénise 22 andro anefa izy. Nodimandry tamin’ny Oktobra 2012 i Maria Richard, izay Vavolombelon’i Jehovah koa. Efa ho 112 taona izy tamin’izay.
Efa niatrika zava-tsarotra maro i Irénise. Tamin’izy vao roa taona monja, dia nipoaka ny volkano teo amin’ny Tendrombohitra Pelée, teo akaikin’ny tanànan-dry zareo any Martinika. Tafavoaka velona tamin’izany izy. Nandeha niasa tany Guyane izy tamin’izy 15 taona ary nandefa vola tany amin’ny havany mba hanampiana azy ireo. Niverina tany Martinika izy, taona maro tatỳ aoriana, ary nanambady sy niteraka. Nampalahelo anefa fa maty tanora i André vadiny ka tsy maintsy nitaiza irery ny zanany telo mirahavavy izy.
Niasa tamin’ny toerana fambolena akondro i Irénise mba hiveloman’izy efa-mianaka. Mbola tsaroan’ireo niara-niasa taminy ny fahazotoany niasa. Hoy ny iray amin’izy ireo, izay efa 80 taona mahery izao: “Iray andro fotsiny izy dia mahavita mikarakara lafitr’akondro lehibe 175 mahery mba haondrana!”
Manana toe-tsaina tsara foana i Irénise na dia sarotra aza ny fiainany. Manana zanaka aman-jafy 75 izy, ary nilaza ny iray tamin’izy ireo fa “tena mampihomehy sy be sangy ary tia mitantara ny fiainany taloha” izy. Maro amin’ny olona ela velona no toy izany.
Tsy ny fototarazony ihany no mety hahatonga ny olona ho ela velona fa ny fomba fiainany sy ny toe-tsainy koa. Rehefa anontaniana ireo mahatratra zato taona hoe inona no maha ela velona azy, dia maro no milaza fa tsy miovaova ny zavatra ataony, mahalala onony izy amin’ny sakafo, ary mankafy fiainana foana. Izao no famaranan-tenin’ny lahatsoratra iray: “Tena mavitribitrika izy ireo.”
Maro no mihevitra hoe nilamindamina foana ny fiainan’ny olona ela velona, nefa diso izany. Nasehon’ny fandinihana natao tany Frantsa fa nahavita niaritra zava-tsarotra ny ankamaroan’ireo nahatratra zato taona. “Olona matanjaka nahavita nandresy ny zava-tsarotra nolalovany” izy ireo.
Toy izany mihitsy i Irénise satria niaritra zavatra maro izy. Faly erỳ ny iray amin’ny zafikeliny miresaka momba ny toe-tsain’i Irénise. Hoy izy: “Tsy mitaraina mihitsy izy na dia tsy afaka mandeha tsara intsony aza.”
Katolika hatramin’ny mbola kely i Irénise ary maro no tiany ho fantatra momba an’Andriamanitra sy ny antony mahafohy ny fiainana. Rehefa nianatra Baiboly tamin’ny Vavolombelon’i Jehovah izy vao nahazo valiny mahafa-po. Nanokan-tena ho an’i Jehovah Andriamanitra izy tamin’izy 74 taona. Izao no valin-teniny rehefa anontaniana izy hoe ahoana no hahazakany ny fahanterany sy ny tsy fahasalamany: “I Jehovah no heriko. Izy no ‘sandriko mahery.’ Izany no mahatonga ahy hahatsapa hoe ‘havaozina isan’andro’!”—Deoteronomia 3:24; 2 Korintianina 4:16.